Amabhaso okuqala e-K-Pop e-Indonesia ngoku ngokusasaza ngqo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Amabhaso okuqala e-K-Pop e-Indonesia ngoku ngokusasaza ngqo
I-Tokopedia, inkampani yetekhnoloji enendawo yentengiso e-Indonesia, ibhengeze amaqela e-megastar aseMzantsi Korea ali-10 ehlabathi jikelele kuluhlu lwayo lokuqala lwe-WIB: I-Indonesia K-Pop Awards nge-25 kaNovemba ka-2021.
La maqela ali-10 yi-BTS kunye ne-BLACKPINK, amabini oonozakuzaku bohlobo lweTokopedia, kwaye ngokunjalo, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number, kunye ne-Aespa.
I-WIB: IiMbasa ze-K-Pop zase-Indonesia ngumsitho wokuwonga ovela kuluntu lwase-Indonesia kumaqela e-megastar asele ekhankanywe ngasentla abalandeli bawo bavote nge-Tokopedia. I-WIB Indonesia K-pop Awards ka-2021 iya kuba ngumboniso wokuqala wembasa onikezelwe kubalandeli be-K-pop e-Indonesia, kwaye iya kuthi ibonise imidlalo eyahlukileyo eyahlukeneyo evela kumaqela.
Abahlali behlabathi liphela banokusasaza i-WIB: I-Indonesia yeMbasa ye-K-Pop nge-25 kaNovemba ukusuka nge-19.00 ukuya kwi-21.00 Ixesha laseJakarta (UTC+7) ngokusebenzisa i-Tokopedia Dlala ngaphakathi kwe-app ye-Tokopedia kunye nejelo le-YouTube elisemthethweni le-Tokopedia. Abalandeli banokubukela umboniso ngokusebenzisa ikhonkco elilandelayo kwaye bayakhuthazwa ukuba babeke izikhumbuzo ukuze bangaphoswa yi-premiere.
Ukubandakanyeka kwamaqela ahlukeneyo e-megastar ehlabathi laseMzantsi Korea kwiphulo lase-Tokopedia langaphambili leXesha lokuThenga lase-Indonesia (Waktu Indonesia Belanja okanye i-WIB) kwanconywa kakhulu, nto leyo eyabangela iincoko kumajelo eendaba ezentlalo nokuba ziphezulu kwizihloko ezihamba phambili kwihlabathi liphela.
Iphulo le-WIB leTokopedia libanjwa rhoqo nge-25 ukuya ekupheleni kwenyanga nganye. Abantu base-Indonesia banokufumana iintlobo ngeentlobo zeemveliso ezineentengiso ezahlukeneyo ezinomtsalane ukwenza ukuthenga kusebenze ngakumbi.